साउदी रियालको बिक्रीदर ३३.०३ रुपैयाँ, डलरको कति छ ? | Ratopati
साउदी रियालको बिक्रीदर ३३.०३ रुपैयाँ, डलरको कति छ ?
आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२३.८९ रुपैयाँ र खरिद दर १२३.२९ रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोक्दै डलरको खरिद÷बिक्री दर तोकेको हो । यसैगरी, एक यूरोको बिक्री दर १३०.८० रुपैयाँ र बिक्री दर १३०.१७ रुपैयाँ छ । यस्तै, पाउण्ड स्टर्लिङको बिक्री दर १५३.२३ रुपैयाँ र खरिद दर १५२.४९ रुपैयाँ छ । ८६.७७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको अष्ट्रेलियन डलरको खरिद ८६.३५ रुपैयाँ छ ।